Etu esi mejupụta Vitae Vitae na ndebiri weebụ? | ECommerce ozi ọma
Otu n'ime isi ndụmọdụ ị nwere ike ịgbaso dejupụta Akwụkwọ Usoro Ọmụmụ na ndebiri weebụ es iji zere na ha n'oghahie na nsupehie, ebe ọ bụ na enweghị ụdị a ga-egosi na ị bụ akpachapụghị anya na enweghị ọrụ. Lelee na ozi gị niile dị na CV, ihe kachasị mkpa bụ na nkọwa kọntaktị ahụ ziri ezi, lelee ha ugboro abụọ ọkacha mma, ebe ọ bụrụ na ha gbalịa ịgwa gị okwu ọ dị mkpa ka ihe ọ bụla ghara ịda. Na-eji a ụdị ị nwere ike ịmata n'etiti otu narị ndebiri ndebiri ihe dị na ịntanetị ọkacha mma na agba na-anọpụ iche na ụfọdụ nkọwapụta obi ike, grafụ nke mmụta na ngalaba ụfọdụ, ọcha ọcha, mkpụrụedemede ojii na mkpụrụ edemede ederede. You chọrọ ịhụ ozi ndị ọzọ? N’okpuru, ị ga - ahụ ihe niile ịchọrọ ịma iji mezue a malitegharịa template dị ka pro.
1 Ndụmọdụ iji mejupụta Vitae Vitae na ndebiri weebụ
2 Kedu Usoro Mmụta Vitae nke m ga-eji?
3 Etu esi dejupụta ndebiri ndebiri?
3.1 E nwere ụzọ ụzọ atọ dị iche iche iji dee Vitae:
3.2 Ihe ọmụma nke Usoro Ọmụmụ Vitae ga-enwerịrị dị ezigbo mkpa iji nweta ọrụ ahụ:
4 Zere na mmalite gị
5 Ebe foto
6 Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet
7 Peeji nke Job
Atụmatụ maka dejupụta Akwụkwọ Usoro Ọmụmụ na ndebiri weebụ
Debe ọmụmụ na diplọma metụtara ya ya na oru ichoro itughari onwe gi.
Ya adịla mgbe ị ga-agha ụgha ma ọ bụ ikwubiga okwu ókè Nkà gị na Usoro Ọmụmụ bụ ọrụ a na-ahụkarị iji rute n'ọnọdụ ndị achọrọ, mana mgbe ị ga-egosipụta nka ọrụ, onye ọ bụla ga-amata na ị gha ụgha.
Zere narcissism Ikwu okwu banyere otu ị zuru oke dịka onye ọrụ ga-esi wute onye na-agụ ya ma na ị gaghị enweta ọrụ ahụ.
Hazie ọrụ ndị ọzọ gị n'usoro oge, egbula iwepu ụbọchị ma ọ bụ ogologo nkwekọrịta. Ọ bụrụ na ị nwere ahụmịhe na-adịghị mma na ọrụ, ọ ka mma ịghara itinye ya, ebe ọ bụ na, ọ bụrụ na ha kpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ, ha ga-enye gị aha ọjọọ.
El malitegharịa bụ ikekwe kasị dị ike ngwá ọrụ na anyị nwere mgbe anyị na-achọ ọrụ, n'ime ya anyị na-egosipụta nmeri na mmụta niile anyị mụtara kemgbe ọtụtụ afọ, yana otu ndị a ga-esi nye aka na ụlọ ọrụ ị na-etinye maka imeziwanye n'akụkụ dị iche iche, ma gboo mkpa nke ọnọdụ ahụ ị na-etinye akwụkwọ maka.
Onye njikwa ọrụ mmadụ nke ụlọ ọrụ ịchọrọ ịbanye, ikpe ikpe dị gị malitegharịaỌ bụrụ na ọrụ gị enweghị isi na mbụ, ọbụnadị ị gaghị elebanye anya n'etiti ndị ga-eso n'ọkwa.
Kedu Usoro Mmụta Vitae nke m ga-eji?
Ọ bụrụ na ịmaghị nke amalitegharịa ndebiri iji mejupụta, budata ọtụtụ, tinye data gị na ndị a ma nyochaa nke a na-ahụ karịa nke ọma, ọkachamara na izizi. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ka igbu oge, ọ bara oke uru ịme ọtụtụ ụdị CV iji mata nke na-enye gị ọdịdị kachasị mma n'ozuzu ya.
Must ga-atụle na CV dị ka mgbasa ozi, nke onwe gị na ikike gị na nka gị iji rụọ ọrụ bara uru na ụlọ ọrụ ahụ. Isi ihe bụ na onyinye a na-enye ozi n'ụzọ doro anya, n'ụzọ doro anya, nke ọma na nke zuru oke.
Etu esi dejupụta ndebiri ndebiri?
Enwere ọtụtụ puku ndebiri dị iche iche iji hazie ozi nke CV gị. Must ga-ahọrọrịrị nke kacha daba ụdị ọrụ ịchọrọ inweta, yanakwa nke kacha daba ndụ gị na ụdị mmadụ gị, ọ bụ ezie na ihe kachasị dị mkpa bụ ịdebe ndetu nke ederede na nghọta doro anya nke ozi ahụ. .
Iji nwee ike ide CV magburu onwe ya, ị ga-ahụrịrị nke ọma banyere ihe ị kwesịrị na ihe ị na-ekwesịghị ịgụnye.
E nwere ụzọ ụzọ atọ dị iche iche iji dee Vitae:
Usoro oge: a na-ahazi ozi ahụ dịka o mere na ụbọchị
Ọtọ: A haziri ozi ahụ site na isiokwu
Ngwakọta: Ọ na - amalite site na ụdị CV na - arụ ọrụ ma gwụchaa site n'ịkọwapụta oge na - akọwapụta ihe ndị bụ eziokwu.
Ihe ọmụma nke Usoro Ọmụmụ Vitae ga-enwerịrị dị ezigbo mkpa iji nweta ọrụ ahụ:
Ikwesiri itinye na nkebi a, ihe omuma ihe omuma, dika Aha, Afọ, ebe amụrụ gị, Kpọtụrụ site na mkpanaka, ozi na netwọk mmekọrịta, Ọkwa kachasị n'ọkwa, yana ọnụ ọgụgụ nke ọrụ aka ọrụ na ahụmahụ ọrụ na ị nwetaworo, ya bụ, ọ bụghị naanị na ị gụnyegoro ọrụ ndị gara aga kamakwa ịgụnye ọmụmụ ihe, ebe obibi, ọrụ mmekọrịta na ndị ọzọ
Njikwa Asụsụ, Nchịkwa nke mmemme dijitalụ ma ọ bụ ngwanrọ a kapịrị ọnụ, tinyekwara pasent nke ihe ọmụma banyere ya, dekọọ ya site na eserese ma ọ bụ jiri pasent ọnụọgụ, ihe dị mkpa bụ ka ị ghara ikwubiga okwu ókè, ma ọ bụ ichefu nkà gị, ha nwere ike ịkwado gị ọrụ.
Nye ya ihe okike. Imirikiti ndị mmadụ na-ede CV ha na nhazi okwu Microsoft, nke a maara n'ụwa niile maka uru ọ bara, anyị na-ekwu maka Microsoft Office Word, nke a na-ahụ maka ịnye ihe ngwọta na ngosipụta agwa, mana makwaara ya maka nhọrọ mmezigharị oge ochie, na mwepu ndebiri ndebiri, na ọ bụ ya mere ọtụtụ ndebiri izizi na-ekesasị na ịntanetị nke ga-eme mgbanwe.
N'otu ụzọ ahụ ị ga- chọọ ọdịdị na ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ịnwere ike iji mmemme dị ka Photoshop ma ọ bụ Adobe Illustrator, bụ nke kachasị mma, ha na-enye ọtụtụ nhọrọ eserese na eserese, nke ga-enye gị ngosi kachasị mma, mana chọrọ ntakịrị ihe ọmụma, ọ bụ ezie na a na-edozi ha n'ụzọ yiri nke ahụ n'okwu ederede edezi na ọ bụ naanị anyị mkpa, na njedebe nke ndezi niile nke ozi gị, dị ọtụtụ ngosi ka ukwuu na ogo dị egwu, ichekwa na izipu CV gị na PDF.
Ọ bụrụ na ịnweghị njikwa nke mmemme ndị a, enweghị nsogbu, yana ndebiri ndị juputara n'ịntanetị maka Okwu, ị nwekwara ike ime mgbanwe.
Dị mkpirikpi. Ọ bụ ezie na akụkọ ọrụ gị nwere ike buru ibu, gbalịa ịdị nkenke n'ihe ị na-ekwu ma mee ka ahụmịhe na ihe ọmụma gị dị mfe, cheta na ihe pere mpe.
Kọwaa ihe omume nke ọrụ ọ bụla ị rụburu, tinyere ibu ọrụ na ọrụ ndị i nwere.
Zere nke gị usoro ọmụmụ
Kọwaa ọrụ ụlọ akwụkwọ gị dum, Ọ dịghị mkpa ịgụnye ebe ị gara ụlọ akwụkwọ praịmarị, nke bụ eziokwu bụ na gụnyere ogo agụmakwụkwọ kachasị elu gị na-ekpughe ọtụtụ na ị ga-emerịrị ogo ndị ọzọ iji ruo ebe ahụ, nke kachasị mkpa nwere ike ịbụ High School ma ọ bụrụ Emechaala ya ma ọ bụ nke ị na-agụ, na Mahadum, nke ama ama ya nwere ike ịnye gị uru karịa ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ.
Tinye ego ị tụrụ anya inweta, Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ oge ụgwọ a na-akwụ gị dabere na ibu ọrụ na mkpa ọkwá gị na mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, etinyela ihe ị na-eche merie, mma tinye mgbanwe karịa ị na-eche rụọ iji melite ụlọ ọrụ ahụ.
Mee ka echiche okpukpe, nke ọchịchị na nke mmekọrịta mmadụ na ibe gị mara ha adịghị mkpa na CV gị wee hapụ ịhapụ paragraf ọ bụla banyere nke a.
Gha banyere ọrụ gị, Dịka ekwurula na mbụ, ịgha ụgha agaghị adị mma, n'ihi na a ga-achọpụta gị n'oge na-adịghị anya.
Akụkụ nke ọtụtụ ndị na-eleghara anya, mana na ị ga-elekọta ọtụtụ, bụ foto ị na-etinye na mmalite gị. Ahọpụtala nke ị chere na ọ kachasị mma na ya. Ọ bụ ihe amamihe, họrọ kpomkwem foto ịchọrọ itinye na CV gị, nke ọma, ebe a na-ahụ ihu gị n'ihu, dị ọcha, na ntutu isi gị., na ịkpụ na-egosipụta gị, ma ọ bụ naanị mere, ọ dịkwa ezigbo mkpa na ndabere dị ọcha.
Ga-ebunye ihe onyonyo dị egwu na nke ọkachamara, naanị gị apụta, ọ bụghị na ọ bụ otu ma ọ bụ foto otu ebe.
Akụkụ ọzọ dị mkpa bụ gụnyere njikọ kpọmkwem na weebụsaịtị gị, blọọgụ nkeonwe gị, Netwọk mmekọrịta gị dịka Facebook, Twitter, LinkedIn na ndị ị chere na ha dị mkpa iji dozie mmekọrịta chiri anya.
Dịka isi okwu mgbe ị na-amalite usoro ọmụmụ gị, ịnwere ike itinye aha ga-akọwa gị dị ka onye ọkachamara, anaghị m ekwu maka ihe ị tinyere - ịkwụwa aka ọtọ, ịrụsi ọrụ ike, ịbịa ihe wdg. Anyị anaghị ekwu maka okwu, kama mkpụrụ okwu na-akọwa ihe ị na-eme. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na mwube: Architect, ọkachamara na nhazi obodo na gburugburu ebe obibi, Director nke Constructora Garco.
N'ime ahụmịhe ọrụ ị ga-etinye:
Aha ọkwá ị nọ.
Aha ụlọ ọrụ ebe ị rụrụ ọrụ.
Oge ị rụrụ, yana nkọwa dị nkenke banyere ọrụ ị rụrụ.
Ejila nkà na ụzụ, ma ọ bụ okwu ndị dị oke egwu, Ọ dị mkpa ka ị cheta na ọ ga - abụrịrị na CV gị ga - ebu ụzọ rute n'aka ndị ọkà mmụta sayensị ma ọ bụ ndị na - ahụ maka mmekọrịta mmadụ na mmadụ, ndị ga - enyocha profaịlụ mmadụ na Psychometric gị, tupu ịmara nke ọma, na teknụzụ, yabụ ọ ka mma na ị doo anya ma dị nkenke na-agbagha ma na-agbagwoju anya.
N'eziokwu, mmalite gị ekwesịghị iwe ihe karịrị otu ibe. Ọ bụrụ na ị nwere ọrụ dị ogologo na ọtụtụ ọmụmụ, diplọma na ọmụmụ ihe, ọrụ njikọ ga-adị ukwuu.
Peeji nke Job
Ozugbo i mechara ihe omuma gi, uzo ozo bu igbasa okwu a.
Banye maka kacha mma ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ, ebe ọ bụ na a na-achịkwa nnukwu ụlọ ọrụ site na nke a, dịka N'ezie, InfoJobs, LinkedIn, CompuTrabajo n'etiti ndị ọzọ.
Ekwela ka ị ziga CV gịNever maghị ụlọ ọrụ ga-anabata arịrịọ ọrụ gị, adala mbà ma ọ bụrụ na ha azaghị nke mbụ 5 ma ọ bụ 10, gaa n'ihu na-agba mbọ na ezigbo ọrụ ga-abata, nke ha ga-ele anya maka profaịlụ gị na ikike gị ka ị wee nwere ike ịrụ na-eme ihe kasị masị gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Etu esi mejupụta Vitae Vitae na ndebiri weebụ?